Acer Liquid Z630 (T03) ကို TWRP Recovery ထည့်သွင်းပြီး Root လုပ်နည်း ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Acer Liquid Z630 (T03) ကို TWRP Recovery ထည့်သွင်းပြီး Root လုပ်နည်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, September 04, 2016 AcerRoot, AndroidAcer No comments
Download and install Acer USB Driver and MTK_Signed_Drivers.zip on your computer.
After that you will seeaCommand Prompt window appears and type the command: adb rebootbootloader
Optional: You can also verify whether you have successfully Rooted Acer Liquid Z630 (T03) or not using theRoot Checker app.
Acer Liquid Z630 (T03) ဖုန်းအတွက် Root လုပ်နည်းကို
ဒီဖုန်းလည်း Bootloader ကိုအရင်ဦးအမြစ်ဖြုတ်ပေးရပါမည် ပြီးတော့
Recvery ထည့်သွင်းပြီးမှ SuperSu.zip ဖိုင်ဖြင့် Root လုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Unlcok ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်တာများကိုအောက်ကလင့်မှာရယူပါ
Download Here MTK_Signed_Drivers
Download Here Acer Z630 USB Driver
ADB and Fastboot ကို ၁၅ စက္ကန့် Installer ကိုကွန်ပျူတာတွင်
Install ပြုလုပ်လုပ်ပါ အောက်ကလင့်မှာလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ
အကောင်းဆုံး ADB and Fastboot ကို ၁၅ စက္ကန့်ဖြင့် Install ပြုလုပ်နည်း
လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီးလေ့လာလို့ရအောင် MTK Preloader Drivers
MT65xx Preloader Driver ကို Install ပြုလုပ်နည်း
ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို Enable ပြုလုပ်ထားပါ။
Windows Command Prompt ကိုဖွင့်လိုက်ပါ W+R ကိုတွဲနှိပ်ပြီး
Run Box တွင် CMD လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Command Box ပွင့်လာတဲ့အခါ အောက်ပါစာသားကို
မှန်အောင်ရိုကထည့်ပြီး Enter ကိုတစ်ချက်ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
Fastboot mode တွင် အောက်ပါစာသားကိုထပ်ရိုက်ထည့် Enter ခေါက်
တကယ်လို့ ADB Devices အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ USB Driver ကိုပြန်လည်စီစစ်ကြည့်ပါ
Devices သိပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါစာသားကိုထပ်ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုခေါက်ပါ။
Unlocking ပြုလုပ်နေတုန်းခနစောင့်နေလိုက်ပါ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့
အောက်ပါစာသားကိုရိုက်ထည့်ပြီး ဖုန်းကို Reboot ချလိုက်ပါ။
ဒီတစ်ခါ TWRP Recovery ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်တာများကို
Download SP Flash Tool Zip
Download Here MT6735-Android-Scatter.txt file
Download Here BETA-SuperSU-v2.52.zip
ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ Flash Tool ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
Scatter File ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး MT6735-Android-Scatter.txt ရွေးချယ်ပါ
ပြီးရင် Recovery နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Flash Tool မှ
Download ဆိုတာကိုနှိပ်ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာဖြင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ
ကွန်ပျူတာကဖုန်းကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ process တစ်ခု ရေး
အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါ အောက်ပုံအတိုင်း မြင်နေရပါလိမ့်မယ်
SuperSU.zip ဖိုင်ကို SD Card သို့ထည့်ထားလိုက်ပါ
"Volome Down and Power" တွဲနှိပ်ပြီး TWRP Recovery Mode သို့ဝင်လိုက်ပါ။
Volume Down ကရွေးချယ်ပြီး Volume Up အတည်ပြုပေးတဲ့ခလုပ်ပါ။
SD Card မှာ SuperSu.zip ဖိုင်ကို Install ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Reboot System ကိုနှိပ်ပြီး Reboot ချပေးလိုက်ပါ
ပြန်တာလာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Supersu apk လေးမြင်နေရပါလိမ့်မယ်
Root access ကိုတော့ Root Checker ဖြစ့်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။